Nnụnụ elephant: àgwà, ebe obibi, omume na ndị ọzọ | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 16/11/2021 10:00 | Ciencia
El nnụnụ elephant o Aepyornis pụtara n'etiti nnụnụ ndị kasị ukwuu na ndị kasị sie ike n'ụwa, na-enwe ihe ruru kilogram 500 (ostrich ugboro ise) na ịdị elu nke mita abụọ ruo atọ na ọkara. Ibi n'ime ọhịa Madagascar. O nwere ihe ndị yiri nke enyí nnụnụ nke oge a, mana ihe atụ mkpụrụ ndụ ihe nketa anakọtara na àkwá fosil jikọtara ya na kiwi. Enweghị data a kapịrị ọnụ banyere mgbe ọ kwụsịrị, ma e kwenyere na ọbịbịa ụmụ mmadụ n'àgwàetiti ahụ nwere ike imetụta mwepu ya n'ihe dị ka afọ 2.300 gara aga. Aha ya sitere na ntụgharị asụsụ nke ndị bebi nke "vouron patra", nke pụtara n'ụzọ nkịtị nnụnụ ma ọ bụ nnụnụ elephant.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nnụnụ elephant, ihe àgwà ya na ihe ndị dị na ya.
1 Evolushọn na akụkọ ihe mere eme nke nnụnụ elephant
3 Ebe obibi na omume nke nnụnụ elephant
Evolushọn na akụkọ ihe mere eme nke nnụnụ elephant
A na-eme atụmatụ na nnụnụ enyí malitere 80 nde afọ gara aga wee ruo nnukwu nha n'ihi nnukwu àgwàetiti ndị ahụ, nke a bụ usoro evolushọn, mgbe ha rutere n'àgwàetiti ma ọ bụ ókèala dị anya site na ebe obibi mbụ ha, oke ha ga-abawanye.
Mgbe ndị Western rutere Madagascar ihe dị ka narị afọ nke XNUMX, ọ tụrụ ha n'anya ịnụ ka ndị obodo ahụ na-ekwu banyere nnukwu nnụnụ na-ebi n'oké ọhịa. Ọ bụ mmadụ ole na ole kweere na ha ruo n'etiti narị afọ nke iri na itoolu, mgbe a kpọgara nsen na ọkpụkpụ atọ nke ihe atụ a na Paria.
Ọkpụkpụ ndị a chọtara n'oge dị iche iche malitere na narị afọ nke mbụ na nke abụọ. A chọpụtakwara akwa akwa dị narị afọ 1000, nchọpụta ndị a mere ka ndị ọkachamara chepụta ịdị adị ha n'ime mmadụ. Otú ọ dị, ụbọchị mkpochapụ ka bụ ihe omimi. Ụfọdụ ndị chere na ọ ga-abụ na o mere na narị afọ nke XNUMX.
Okpokoro isi na olu nnụnụ enyí yiri nnọọ nke enyí nnụnụ, ma nnyocha ndị e mere n'oge na-adịbeghị anya gosiri na nnụnụ ndị a enweghị mmekọrịta nna ochie. Ibu ya na nha ya na-eme ka ọ bụrụ nnụnụ nke abụọ kachasị ogologo n'akụkọ ihe mere eme, naanị Moas nke New Zealand na-ekpochapụ karịrị ya.
Nnụnụ a nwere nnukwu ụkwụ dị ike na aka ukwu dị ike. Ọ na-aga nwayọọ nwayọọ n'ihi na ọ dịghị mkpa iru nnukwu ọsọ n'ihi na o nweghị ndị iro ebumpụta ụwa ruo mgbe ụmụ mmadụ bịarutere.
Ọ nweghị ike ife efe, mana o nwere nku buru ibu na-etolitebeghị. Nnụnụ ha dị ogologo ma tụọ ntụ, yiri nke emu. Ọnụ ọnụ ya na-adị ka igbe. Akwa nnụnụ elephant nwere ike iru dayameta nke otu mita na otu elu nke 33 centimeters, na nsị nsị nwere ike iru 9 lita. Ọ bụrụ na atụnyere akwa ọkụkọ, ọ ga-ewe ihe dị ka nkeji 200 iji mejupụta otu n'ime ihe ndị a. Otu akwa nnụnụ enyí nwere ike inye mmadụ 120 nri.
Ebe obibi na omume nke nnụnụ elephant
A na-ekwu na nnụnụ enyí ahụ ebiwo n'oké ọhịa ndị dị na Madagascar ihe karịrị afọ 60.000, ma ọhụụ ikpeazụ e dekọrọ na ya mere n'ime ọhịa apịtị nke agwaetiti ahụ. Ha bụ nnụnụ ahịhịa. Ha na-eri nri na osisi na mkpụrụ osisi sitere n'àgwàetiti Madagascar, yana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ na alaka. A na-atụ aro ka itinye mkpụrụ osisi Arecaaceae na nri gị.
Enwere echiche dị iche iche banyere ihe kpatara mkpochapụ nke nnụnụ a, mana ha niile kwenyere na ụmụ mmadụ gburu ya. Nnụnụ ahụ chịrị àgwàetiti ahụ ruo ogologo oge. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime anụmanụ ndị kasị ibu na ebe niile. O nweghị ndị iro ebumpụta ụwa ma ọ bụ anụ ndị buru ibu nke ga-achụ nta ya.
Ozizi nke mbụ na-ekwu na mkpochapụ ahụ mere ihe dị ka afọ 2.000 gara aga, na ọdịdị nke ụmụ mmadụ n’àgwàetiti ahụ bụ akara ọbịbịa nke anụ ọhịa mbụ nke pụrụ imeri nnụnụ. N'ihi oke ha buru ibu, o doro anya na ndị ọbịa ahụ gburu ha n'ihi na ha bụ isi iyi nri maka ndị mmadụ. N'agbanyeghị nke ahụ, echiche ahụ na-ekwu na ọ bụghị ndị mbụ biri n'àgwàetiti ahụ mere ka ọ pụta ìhè n'ikpeazụ, ebe ihe ndekọ na-egosi na ọtụtụ n'ime ha lanarịrị.
Ma ka ndị Arab rutere n’ụsọ oké osimiri Madagascar, ọnọdụ ahụ kara njọ, n’ihi na ọ bụghị nanị na a chụpụrụ ha, kama ha na-ebibi akwụ́ ha iji zuru àkwá. Na nke a, ha gbochiri mmeputakwa nke nnụnụ. Ihe kacha mkpa mere n'iyi ahụ bụ igbukpọsị osisi maka ọrụ ugbo, si otú ahụ na-ebibi ụlọ ha.
N'ikpeazụ, n'ihi na-aga n'ihu na-egbukpọsịsị osisi ebe obibi akwụ ha, anụmanụ ndị a mechara kpochapụ na narị afọ nke 34. N'ụzọ ụfọdụ, ụfọdụ ndị na-esi ọnwụ ibibi ihe niile. Ugbu a ọ bụ naanị ọkpụkpụ fosil na akwa nnụnụ enyí ka ahụrụla. Ụfọdụ n'ime nke ikpeazụ nwere gburugburu ihe karịrị otu mita na dayameta nke ihe karịrị 160 cm. Iji nye gị echiche, olu ya ji ihe dị ka okpukpu XNUMX karịa nke àkwá.
Akụkọ mgbe ochie na-ekwu na mgbe Marco Polo gafere Madagascar, ọ nụrụ asịrị banyere nnukwu nnụnụ, nke mere ka akụkọ akụkọ nke nnụnụ Roc pụta. Nnụnụ ndị a buru ibu na-ebi n'ugwu ma ọtụtụ ndị edemede kpọpụtara ha n'ọrụ ha. Nnukwu ugo nwere nnukwu ike.
Akwa nnụnụ enyí bụ nke kasị ukwuu e dekọtụrụla, ọbụna ibu karịa nke dinosaur. N'afọ 2015, a ga-ere akwa nnụnụ elephant maka ihe dịka 70.000 euro. Afọ ya dị narị afọ anọ.
Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị ajụọla ajụjụ ma ò nwere ike ime ka nnụnụ enyí ahụ kpụọ. Ebe ọ bụ na mmadụ na-arụ ọrụ Chineke, o bu ụzọ nwee obi ụtọ nke ikwe ka ihe ndị ọzọ e kere eke laa n’iyi n’atụleghị ihe ga-esi na ya pụta. Mgbe ahụ gbalịa ịkpọlite ​​ha n'ọnwụ. Ihe ga-esi na ya pụta ka siri ike ịgbakọ.
Ọ bụ site n'ịchọta profaịlụ DNA nke anụmanụ na-ekpochapụ ka ọ nwere ike "ịkpọlite." Kedu ka esi eme nke a? Site na usoro cloning, a na-eji "nma na-amụ nwa" sitere na ụdị ọzọ nke otu ezinụlọ. Maka nnụnụ elephant, e nwere ike iji ostriches mee ihe. Ya mere, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na n'ọdịnihu dị nso ị nwere ike ịga na ebe Steven Spielberg chere maka Jurassic Park ya na ọ dịghị ihe ọ bụla ga-enwe anyaụfụ. N'ihe banyere nnụnụ enyí, ka anyị nwee olileanya na ha ga-anọgide na-ejigide àgwà iri nri ochie ha.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nnụnụ elephant na àgwà ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Nnụnụ elephant